Turkiga oo baaraya suxufi galay safaarada Sacuudiga ee Istaanbuul soona noqon - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Turkiga oo baaraya suxufi Sucuudi ah oo ka soo noqon waayay safaarada Sucuudiga ee caasimada Turkiga. Suxufi Jamaal Khashooqi ayaa tagey salaasadii ina soo dhaaftey safaarada Sucuudigu ku leeyahay Turkiga ilaa hadda lama yaqaan waxa ku dhacay.
Sirdoonka Turkiga ayaa aaminsan in Jamaal lagu dhexdiley safaarada dhexdeeda oo xataa hilibkiisa la jarjaray. Jamaal ayaa intuuna safaarada gelin telfoonkiisa kaga tagey gabadh ay wada shaqeeyaan ama u doonan.
Wuxuuna u sheegay hadduu soo noqon waayo inay wacdo madaxweynaha Turkiga una sheegto. ”Waan sugey ilaa saqdhexe iimana muuqdo ayay tiri Xaatis oo ah haweenay Turki ah oo Jamaal rabey inuu guursado.
Xaatis ayaa sheegtay inuu isku buuqsanaa kuna faraxsanayn inuu tago safaarada laakiin uu ku qasbanaadey si uu u soo qaato warqado cadaynaya inuu furay xaaskiisii hore.
Ilaalada safaarada oo baaray kaamarada ku xiran albaabka safaarada ayaa cadeeyay in Jamaal lug kaga bixin safaarada. Waxa kale oo jirey gawaadhi safiiradu leeyihiin oo iyaguna soo galayay siina baxaayay.
Gacan ku dhiiglaha Sucuudiga loona yaqaan dhaxalsugaha qoyska Sacuud ee Sucuudiga Maxamed Salmaan ayaa sheegay inuu rabo isaga laftiisu inuu ogaado halka Jamaal ku maqan yahay inta aanu ka hadlin mucaaradnimadiisa.
Suxuf Jamaal ayaa si adag uga soo horjeeda gacan ku dhiigle Maxamed Salmaan oo dagaal kumanaan lagu xasuuqey ka wada Yaman isla markaana dila dadka fikirkiisa diidan.
Masuuliyiinta Turkiga ee baaraya arintan ayaa qaba in Jamaal lagu dhexdiley safaarada kadibna meydkiisa lagu qaadey gaari. Waxayse u muuqataa hadda arin daahsan waayo waa salaasadii.
Arintan ayaa keeni karta cawaaqib xumo aan la garanayn halka ay ku dambeyn doonto. Erdogan ayaan taageerin cunaqabatayntii Sucuudigu ku soo rogey Qadar maadaama ay isku urur diimeed yihiin.
Wargeys ka soo baxa Maraykanka oo Jamaal wax ku qori jirey ayaa iyaguna qorey in Jamaal ay dileen 15 xubnood oo khabiir ku ah sida dadka loo khaarijyo lagana soo direy Sucuudiga.
Maaha markii ugu horeysay in qoyska Sucuudigu aduunka ka qariyaan dadka mucaaradka ku ah, waxana hore loo waayay dad badan. Qoyskan ayaa ku xiran Yuhuuda iyo Maraykanka waana iyaga kuwa ku haya kursiga.
Sawirkan hoose waa haweenayda u doonan Jamaal oo saacado sugtey
Xisbiga Erdogan ee Turkiga ayaa ku dhaartey in la soo fiqi doono halka Jamaal ku dambeeyay. Wasaarada arimaha dibeda ee Turkiga ayaa u yeertay safiirka Sucuudiga kana cabatey sida wax u dhaceen.
Gacanku dhiigle Salmaan ayaa leh waa la baari karaa safaarada. Si kastaba ha ahaatee waxa la sugayaa in Turkigu soo faqo halka la mariyay suxufi Jamaal.